Khabiirka Cimilada wuxuu bixiyaa Talooyin qiimo leh oo SEO ah oo ku saabsan sida loo hagaajiyo Performance Your Website
Dhab ahaan, waxaa jira waxyaabo badan oo muhiim ah oo laguu tixgeliyo marka adigaayaa abuuraya website. Laga soo bilaabo bogagga qaabeynta si aad u isticmaasho khadadka gaarka ah, wax waliba waa arrin marka ay timaado aqoonsiga goobtaadainternet ah. Waxaa intaa dheer, waa arrin aad muhiim u ah macaamiishaada / akhristayaasha qanacsanaanta. Kuwaas oo dhan waa la samayn karaa si sax ah ulacaawinta raadinta mashiinka raadinta (SEO) sharciyada loogu talagalay qaabeynta bogagga. La kulan shuruudaha raadinta, website-kaagu wuxuu helaa darajo sarenatiijooyinka raadinta
Dhibaatada, oo shirkadaha intooda badani la kulmaan, waa makiinadaha raadintasi joogto ah u wanaajiya una beddesho algorithms sidaas darteed waxay u baahan tahay shaqada takhasuska, kaas oo si joogto ah ula socda wararkii ugu dambeeyey eebarta SEO. Artem Abgarian, Maamulaha Guusha Macaamiisha ee Sare Adeegyada Dijital ah ayaa sharaxaya waxa aad sameyn kartid si aad u hagaajisid waxqabadkaaga boggaaga
Inuu kordho Sawirada Website-ga
Ma ogtahay in sawir kasta oo ku yaal boggagaaga la yareeyn karo? Haa,cinwaanka aad siisid sawirka iyo cabbirka sawirka, dhamaantood waxay muujin karaan dhaqanka SEO wanaagsan. Waxaad awood u yeelan kartaa sawirradaada, oo waxaad ka raadin kartaamashiinka carbuunta oo hoos u dhigaya sawir kasta. Marka mashiinnada raadinta ku dhuftaan webka, sawiradaada internetka ayaa lagu ogaanayaa inay qayb ka yihiinnatiijooyinka. Yaraynta xajmigaaga sawiradaada waxay ka caawisaa xawaareynta xawaareynta webka, taas oo hagaajin karta boggaaga internetka. Sii sawirka akeyword-centric title oo kaa caawin doona macaamiisha si ay u ogaadaan waxa ay raadinayaan.
Diidi Macluumaadka Blocks
Weligaa waxaad ku riixday website, kaliya si aad u ogaatid inaad u baahan tahaybixiso si aad u gasho bogga? Waa hagaag, dadka badankood way ka tagaan goobahaas oo aan marna soo noqon. Ma doonaysid in boggagaaga uu noqdo mid ay dadku ka tagaanxitaa ka hor inta aanay arkin waxaad bixinayso! Haddii aad rabto in aad qayb ka mid ah boggaaga xannibtay, laga yaabee inaad xubin ka noqoto xubnahaaga,xakamee qaybtaas. Ka tag bogga soo degaya lacag la'aan. Ka-tiri dhammaan foomamka aan loo baahnayn, iyo xayeysiisaha xayeysiiska, iyo sidoo kale popups..
Makiinadaha raadinta waxay ubaahan yahiin boggaga internetka in ay si joogto ah u cusbooneysiiyaan content-koodawaxay ku siin karaan dadka isticmaala kalsoonida iyo waqtiga loo baahan yahay. Sidan oo kale, boggaga internetka oo dadaal u galiya si ay u cusbooneysiiyaan mawduucooda si joogto ah,waxaa mudnaanta la siinayaa qaababka algorithms. Haysashada blog waa hab hubaal ah oo lagu hubinayo in boggaaga aan laga saarin tixgelintaqiimeynta sare
Dooro Cinwaan Wanaagsan
Ka dhig URL-gaaga raadiyahaaga saaxiibtinimo adiga oo adeega aad bixisoURL, ama adiga oo dooranaya magac wacan ee URLkaaga. Iyada oo ay ku jirto goobta ama juqraafi ee ku jira URL-gaaga ayaa sidoo kale caawin kara matoorada raadintasi aad macaamiishaada ugu xirto boggaaga.
Geedi socodka Mobile-ga
adduunka oo sii kordhaya helitaanka mobile, Google hadda wuxuu leeyahay qaas ahalgorithm loogu talagalay bogagga internetka ee saaxiibtinimada. Sababtan awgeed, waa in website-kaaga la hagaajiyaa taleefannada gacanta ama khatarta ganaaxa. Adiganaqshadeeyaha webka waa inuu awoodaa inuu doorto naqshad websaydh ah oo ku habboon telefoonnada gacanta. Ha ilaawin inaad sidoo kale ku jirto qaybta buug-yarahakuwa doonaya raadinta codka ku salaysan.
Ku dhajiya Xawaaraha Xilliga
Marka dhan la sheego oo la sameeyo, ha ilaawin inaad ka shaqeyso boggaga internetkaxawaaraha. Dareenka dadku maaha mid aad u dheer, sidaas darteed haddii website-kanaga uu si joogto ah u qaato si uu u buuxiyo, fursadaha ayaadmacaamiisha aad ka fikirto. Waxaa laga yaabaa inay sabab u tahay sababta website-kaaga uusan u badaleynin sidoo kale waa in ay ahaataa. Isku day inaad eegto wax walbataas oo laga yaabo in ay hoos u dhigi karto boggaaga, laga bilaabo plugins ilaa badhitaanka wadaagga warbaahinta bulshada, iyo xataa xajmiga sawiradaboggaaga
Inkastoo qaabeynta bogga iyo naqshada ay muhiim tahay, ha iloobin in SEO yahayarrimaha ugu muhiimsan ee saameynaya waxqabadka boggaga internetka Source . Sawir ku saabsan khibradda Sartaal macaamiisha, dayacaadda SEO ee aadxirfad shaqo ayaa laga yaabaa inay ka dhigto dadaalka suuq-geynta shirkaddaada aan waxtar lahayn